Hevitra momba ny lalao fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny ankizy Iza aho
Tsy misy fanontaniana manimba an'iza aho?
Ny lalao Iza aho? dia lalao maminavina azo lalaovina any ivelany sy any an-trano. Ny isan'ny mpandray anjara dia tsy voafetra, fa amin'ny ankizy kely kosa dia tsy tokony ho mihoatra ny mpilalao 7 izany mba tsy hankaleo loatra ho an'ireo izay tsy milahatra ary hijaly ny fahafinaretan'ny lalao vokatr'izany.
Hevitra momba ny lalao fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny ankizy - Iza moa aho?
Mila sombin-taratasy, kasety ary penina ianao, na dia mety tsara aza ny naoty miraikitra, satria matetika no tsara kokoa noho ny naoty miaraka amin'ny taratasy adhesive.
Fitsipika ho an'iza aho?
Ny mpilalao rehetra dia manoratra amin'ny hoe Iza aho? apetraho eo amin'ny sombin-taratasy ny anaran'olona malaza (ohatra Miley Cyrus) na anaran'ny biby malaza (ohatra Nemo) ary apetaho eo amin'ny handrin'ny mpiara-monina akaiky azy io.
Zava-dehibe tokoa ny hahalalana mialoha raha olona sy biby noforonina ihany na ihany koa no azo fidina. Ho an'ireto farany dia tokony hisafidy tarehimarika toa an'i Barbie na Mickey Mouse ianao ary angamba na ny Teletubbies aza, izay azo antoka fa mahasarika kokoa ny ankizy.
Raha samy manana sombin-taratasy eo amin'ny handriny ny tsirairay dia manomboka maminavina ilay zaza voalohany amin'ny fametrahana fanontaniana izy. Ny laharam-pahamehana ao amin'ny Who am I?: Ireo fanontaniana dia tsy maintsy valiana eny na tsia foana. Ohatra: “Ankizivavy ve aho?” Na koa: “Sarimihetsika iray ihany ve?” Raha valina amin'ny tsia ny fanontaniana dia anjaran'ny mpilalao manaraka izany. Ny mandresy dia izay maminavina ny taratasy kely aloha.
Ny fanontaniana maharatsy, izay mazàna dia mitarika eny eny sahala amin'ny - "Tsy avy amin'ny sarimihetsika Indiana aho?" - na - "Tsy Snow White ve aho?" - dia tokony ho voarara hatramin'ny voalohany, raha tsy izany ny zaza dia afaka mangataka ampahefatry adiny iray tsy misy hahazoana no. Mety ho mankaleo ny vahinin'ny antoko hafa rehetra fa tsy ny teboka rehetra amin'ny lalao.
Hevitra momba ny lalao fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny ankizy namely ny vilany
Reraka aho fa miala sasatra - naoty na lahatsoratra
Fitsangatsanganana hevitra any Jerosalema